Ubomi bethu abahlali behambelana neminqweno namathuba ethu. Oku kusebenza nakwezesondo. Amadoda nabasetyhini baneengcamango zesondo. Kwaye amaqabane abo anokuqiqa ukuba ziphi na iingcamango abazityelelayo. Kodwa abantu banomdla onobudlova kunabesifazane. Kwaba baninzi abafazi bacinga ukuba bahlambalaza. Kodwa bayazi ukuba zeziphi iingcamango ezihanjelwa ngabantu. Kwaye baneminyaka engabantwana. Amadoda amaninzi azama ukuvimbela iingcamango zabo kwaye aziqapheli ebomini. Ngaloo ndlela ke bavula iakhethini zabo ezifihlakeleyo xa bexhunyiwe nayo, ukuba bayayithemba. Yaye intombazana engaqhelekanga ayiyi kuthetha, njengoko iya kuyika iingxoxo kunye nabahlobo bayo. Ukuba iingcamango zakhe azihambisani naso, akayi kubaxelela. Kodwa masingabonakali ukuba ziphi iingcamango zabo.
Kwenzeka ukuba indoda ihamba ngezitrato. Ngokukhawuleza, ebona intombazana ekhangayo neyintombazana, inomdla wokuba uyayithatha njani, iyangqineka, ibambe. Uyenza yonke into ayifunayo naye. Kodwa konke okufanayo uyaqhubeka nendlela yakhe, kodwa kungekhona ngalawo maqhinga athembekileyo ngaphambili.
Amadoda afana nezidalwa ezinomdla njengabasetyhini. Bakuthanda ukubona, kwaye ngokukodwa ukuba ezinye iibini zenza njani.
Akusiyo imfihlo ukuba onke amabhinqa azifaka ezandleni zeenkwenkwezi, kusho uBrad Pitt. Kwakhona, kwaye amadoda aphupha, kuphela kunye nomfazi. Kodwa nakwizandla zabo azimeleli kuphela iinkwenkwezi, kodwa siya kuthetha kumhlobo womhlobo okanye umphathi. Okungenakufikeleleka kumfazi, ngakumbi "uyamnandi" kuye kwaye ufuna.
Nawuphi na umntu amaphupha eentlobano zesini kunye namantombazana amabini, kodwa kwenzeka nokuba enye ibhinqa ezimbini. Ezi ngcamango zihanjelwe malunga nesithathu samadoda.
Kwakhona, indoda ibonisa isondo kwindawo ethile kwenye indawo, yitsho epaki, ehlathini, kwiisanti ezikhululekile, njl. konke kuxhomekeke kwingcamango yendoda. Kwaye le nkqubo yenzeke ngokungalindelekanga.
Wonke amadoda angama-6 amaphupha ngokwesini ngokunyanzela. Kwizinto ezinjalo zengcinga, benza kunye nabasetyhini into abayifunayo, nangona kungavumelani kwaye ngokukhethekileyo kuthatha amandla.
Iingcamango eziqhelekileyo zamadoda zachazwa.
Yintoni enokuthetha ngayo emva kwesondo
Khetha ifowuni ephathekayo ngekhamera
Amadoda angcono abapheki
Iigrafu, iifowuni zokuqokelela
I-sandwich yaseCuban yaseCuban "Ubusuku bobusuku"
Igarlic kwijusi ye-beet
Isidlo sePatato kunye neNkonzo yayo
Iziqholo kunye ne-condiments, kunye nokusetyenziswa kwazo
Yintoni abafana babona umfazi ozayo
Ungavuswa njani kusasa kwaye ujabule?
Indlela yokuhlambulula isinyithi kwi-asele?